Toetra 15 an'ny vehivavy Alpha marina: Ahoana ny fomba hahitana iray - Blog
Toetra 15 an'ny vehivavy alfa marina
Raha manaraka ny foto-kevitra mifandraika amin'ny toetra Alfa, Beta, sns ianao amin'ny toetra lahy sy vavy, dia azo inoana fa nino ianao fa misy vehivavy alfa mampiseho fihetsika manjakazaka sy masiaka.
Ny vehivavy Alfa dia nofaritana ho bossy, manodinkodina, manao firaisana ara-nofo, manambany tena ary manambany, fa mazàna ireo toetra asehon'ny olona maniry fatratra ny hifehezana, saingy tsy.
ny tena izy Alfa vavy mety manana a toetra matanjaka , fa ny mahatonga azy ho mpitondra, izay mitaona ny fahazotoany sy ny fikirizany, dia fahatsapana mafy ny tenany ary misy tanjona.
1. Mampivondrona ny olona izy.
Ny vehivavy Alfa dia mety ho ny 'hub' afovoany ao amin'ny faribolana sosialiny, ary tia mampifandray olona. Amin'ny toe-javatra misy ny vondrona, toy ny fety na fihaonamben'ny asa dia hitarika ny vahoaka manodidina azy toy ny orkesitra izy. Na izany na tsy izany toe-javatra izany dia afaka mahita marimaritra iraisana izy, afaka mampitony ny fifanenjanana, manome aingam-panahy fifanakalozan-kevitra lehibe ary mametraka ireo manodidina azy ho maivana.
Ho hitanao ny tena Alpha amin'ny sehatra ara-tsosialy rehetra, satria ny olona manodidina azy dia hitodika any amin'ny làlan-kalehany hatrany hamantarana ireo famantarana ara-tsosialy.
maninona izy no misintona rehefa avy manakaiky
2. Miaro ny zavatra inoany izy.
Betsaka ny olona manandrana mangina ny vehivavy mahery amin'ny alàlan'ny fanevatevana na fandrahonana azy ireo, ary tsy hanana an'izay. Tsy izy ilay karazana mieboebo na fahalalana tsy hay tohaina rehetra, fa, kosa, manana fahatsapana fahamarinana sy andraikitra matanjaka, ary tsy hitazona ny lelany manoloana ny tsy fahamarinana.
Mety nahatonga ny hafa hihevitra azy ho 'sarotra' io, saingy tena marina fa tsy mpiandry omby tsy misy saina sy tsy mankatò ary faly manara-dia ny sisa amin'ny andian'ondry izy. Fantany ny sainy manokana, nampianariny ny tenany momba ireo lohahevitra izay manan-danja aminy, ary ho mavitrika amin'ny olana izay mampirehitra ny afony anaty izy.
Hahita vehivavy Alfa matetika ianao amin'ny programa fanampiana ny fiarahamonina, na fikambanana tsy mitady tombom-barotra isan-karazany izay manome tombony lehibe kokoa.
3. Maharitra izy.
Mety nipaoka azy imbetsaka ny fiainana, saingy nanao lalan-kaleha izy tamin'ny toe-javatra nisy azy. Mety niatrika aretina, tsy rariny, toe-javatra manararaotra, fahantrana, na fihemorana maro hafa ianao, saingy izy dia naharitra tamin'ny alalany, ary hiverina indray, raha ilaina izany. Amin'ny alalàn'izany rehetra izany dia hitazomana ny tanjon'ny tanjona izy - na dia ny optimisma aza - ary izy. finiavana tsia. manome miakatra
4. Tsy mivadika amin'ny foko misy azy izy.
Raha nahazo ny fitiavana sy ny tsy fivadihan'ny vehivavy Alfa ianao dia azonao antoka fa heveriny ho masina izany. Hiaro anao izy, hijoro eo anilanao rehefa mila azy ianao, ary ho eo ho anao mandritra ny matevina sy manify. Raha mampanantena anao izy, ny antony tokana hanitsahany io voady io dia raha toa ka tsy afa-miasa, na maty.
Mety manana olom-pantatra maro izy, fa ny vehivavy Alfa mahazatra dia manana namana akaiky tena kely izay navelany hiditra ao amin'ny fitoerana masina, raha lazaina. Na dia afaka mametraka rapport miaraka amin'ny olona rehetra aza izy, rehefa manaja ny manodidina azy amin'ny fanajana sy ny fahalalam-pomba izy dia tsy matoky mora. Rehefa nahazo ny fitokisany ny olona iray, dia heveriny ho 'fianakaviana' izy ireo ary hanao zavatra ho azy ireo fotsiny.
Tahaka ny amboadia amboadia, mahatsapa andraikitra lehibe amin'ny olona ao anaty kitapony izy. Hataony izay ilaina mba hitazomana azy ireo ho matanjaka, ho salama ary ho voaro.
5. Matoky ny tenany sy ny fahaizany izy.
Ny fomba fijery stereotypical an'i Alphas dia hoe be akoho izy ireo ary somary kely miavonavona , saingy tsy izany no izy.
Matoky ny maha izy azy sy ny mahaizy azy ny vehivavy Alfa antsika, saingy tsy mirehareha na mitady dera sy fifantohana amin'izany izy.
Fa kosa, mandeha am-pahanginana amin'ny fiainany izy miaraka amin'ny karazana fahatokisan-tena izay manome azy tanjaka anaty sy fiadanam-po. Tsy maharitra ao an-tsainy ny fisalasalana rehefa ampahatsiahiviny ny tenany ny zavatra azony atao.
6. Manana fanajana tena sy fahamendrehana izy.
Raha misy vehivavy Alpha tena izy mahita ny tenany amin'ny toe-javatra iray izay tsy maintsy nanilika ny foto-pitsipiny mba hahasambatra olon-kafa, azonao antoka fa hametraka ireo fanantenana ireo izy mba hitazomana ny fanajan-tenany. Tsy hanaiky lembenana amin'ny fitsipiny izy.
Toy izany koa, hitondra tena amin'ny fahamendrehana sy fahasoavana izy. Raha efa antitra izy, dia tsy azo inoana ny mitafy ny akanjon'ny zanany vavy amin'ny fikasana hifikitra amin'ny tanora, fa kosa hitafy akanjo izay mahatonga azy hahatsapa ho tsara tarehy sy matanjaka.
Ity dia vehivavy izay tsy hiondrika amin'ny fomba mampihomehy mba hisarihana ny sain'ny olon-kafa: raha toa ny olona voalaza fa tsy mametraka fotoana na ezaka hahalala azy dia marina izany. Mety hanenina amin'ny safidin'izy ireo ara-potoana izy ireo, mety tsy…… na izany na tsy izany dia nanao izay hahamety ny tenany izy. Araka ny tokony ho izy.
7. Mikatsaka ny hitombo sy hianatra izy.
Ny fahatokisany dia mamela ny vehivavy Alfa hiakatra amin'ny karazana fanamby, ary manana faniriana hifanaraka amin'ny fahaizany izy.
Izy dia mitady mandrakariva ny lesona amin'ny zavatra ary miezaka ny ho tsara kokoa sy hanao tsaratsara kokoa. Na dia afa-po amin'ny olona misy azy aza izy, dia fantany fa misy fifaliana hita amin'ny fivoaran'ny tena fa tsy ny fijanonana.
fisakaizana iray amin'ny lehilahy iray
Mijanona eo amin'ny sisin'ny asany izy, mamaky lohahevitra marobe, ary mijery horonantsary fanadihadiana marobe izy. Ireo rehetra ireo dia manampy amin'ny famolavolana azy ary manome azy ny zavatra tokony hamboleny.
tokony hatao rehefa mankaleo aho
8. Miaina ny fahamarinany manokana izy.
Ity vehivavy ity dia mety hiaina fiainana tsy mahazatra izay mety tsy ho takatry ny hafa, ary tsy maninona izany. Ny olon-kafa dia mety hibitsibitsika momba azy ao ivohony, manameloka azy fa tsy nanao safidy safidy mitovy amin'ny nataon'izy ireo, maneso ny safidiny lamaody, ary amin'ny ankapobeny tsy azony hoe ahoana no fomba hiainany amin'ny fomba fiainany… fa ny hevitr'izy ireo tsy misy dikany. An'ny tenany ny fahamarinany. Faran'ny.
9. Tsy manambany vehivavy hafa izy.
Ny vehivavy sasany izay nantsoina hoe 'Alphas' dia malaza ho masiaka amin'ny hafa manodidina azy, indrindra ny vehivavy hafa. Izy ireo dia aseho ho toy ny catty, mitsaratsara zavaboary izay haneso ny safidin'ny lamaody vehivavy hafa ary hanaratsy ny olom-peheziny any amin'ny birao mba hanaporofoana fa izy ireo no sefo.
Ny Alpha tena izy dia tsy misy ilana azy marivo hadalana.
Fantany hoe iza izy sy ny fomba nahatongavany tany, ary azo inoana fa hamporisika ireo izay hitany fa mety izy. Hampiakatra ny tohatra tsy ho ela izy, ary rehefa manao izany izy dia maniry vehivavy mahay sy matoky tena hanaraka ny diany.
Fantany fa voaozona tsara fa ny hany fotoana hijereny ambany olona dia rehefa manolotra tànana izy ireo hanampy azy ireo, ary tsy mila manamafy ny fahatokisany tena amin'ny fiezahana hanorotoro olon-kafa.
10. Mihetsika izy.
Ity vehivavy ity dia mandray ny omby amin'ny tandrony ary manamafy ny fitaomany amin'ny fiainana.
Tsy miandry zavatra hitranga izy, izy manao mitranga izany. Mpanatanteraka izy, mamolavola drafitra ary manaraka izany, mametraka tanjona ary miasa hamadika izany ho zava-misy.
Matetika izy no hery mitarika amin'ny vondron'olona, ​​mikarakara hetsika, manome hevitra, manome antoka fa vita ny raharaha.
11. Mandà tsy hilalao lalao izy.
Izany dia mifanaraka amin'ny zava-misy fa hiresaka ny sainy sy hilaza izay ilainy izy: tsy misy ilana lalao mihitsy izy, ary handà ny hilalao azy ireo.
Tsy manam-paharetana amin'ny fanabeazana tokana eo amin'ireo namany izy, lalao herinaratra any amin'ny birao, na fifosana, indrindra raha toa ka manimba. Raha misy olona manandrana milalao mafy hahazoana fifandraisana mba hahatonga azy hanenjika azy ireo, dia azo inoana fa hiteny izy hoe 'f * ck that', mankanesa any ivelany, ary mandany alina manala-tena.
Tsy hiditra amin'ny herisetra mandalo fotsiny izy, na hanandrana hanao izay hahasaro-piaro olon-kafa raha mahatsapa izy fa tsy dia mahasarika ny sainy. Tsy manana ahiahy momba ny fisokafana sy ny fifampiresahana momba ny zavatra tsapany sy izay ilainy izy ary manantena ny hafa hitondra tena amin'ny fahamatorana mitovy.
Amin'ny fiaraha-miasa - na orinasa na an'ny tena - mila mitovy izy. Tsy olona hanandrana hanamaivana ny lelany, na olona maniry azy ho reny. Mety efa nitazona ireo gauntlets ireo izy, nianatra tamin'izy ireo ary nilaza hoe 'tsy hiverina intsony.'
12. Izy dia mitarika avy ao anaty vondrona.
Na eo aza ny eritreritry ny olona maro, ny vehivavy Alfa tsy mitarika avy eo aloha, mitarika avy ao anatiny izy.
Mamporisika ny mpikambana tsirairay ao amin'ny ekipa iray izy hanatanteraka ny fahafaha-manaony ary manome antoka fa hiara-hiasa amin'ny fomba mahomby ny olona hamita ny lahasa iray.
Azo antoka, nanolotra solontena izy, saingy tsy misoroka andraikitra ary afaka - ary hanana - tafiditra ao amin'izay ilana atao. Ireo mpiara-miasa aminy na mpiara-miasa aminy dia mankafy azy amin'izany ary dodona ny hanatsara ny lalao hataon'izy ireo mifanaraka amin'ny ezaka ataony.
13. Manetry tena izy.
Tsy misy olona diso. Tsy misy olona tonga lafatra. Samy manao fahadisoana daholo isika na Alpha na tsia.
Fa ny tena Alfa dia tsy manalavitra ny tsy fahombiazany. Tsy manandrana mamindra ny tsiny amin'ny hafa na amin'ny zavatra hafa izy raha tena azy ny mandray azy.
zavatra tokony hatao rehefa ao anatiny noloahany
Azony atao ny miaiky rehefa diso izy na rehefa tsy nahatanteraka ny fanantenany manokana.
Rehefa dinihina tokoa, ny fahatsapany tena matanjaka dia midika fa tsy mahamenatra azy ny mitanjozotra sy milatsaka satria fantany fa afaka mitsangana izy, manala vovoka ary manandrana indray.
14. Tsy atahoran'ny lehilahy izy.
Ny vehivavy Alfa dia mijery ny lehilahy ho olon-kafa fotsiny ary tsy mahatsiaro ho ambany na matahotra.
Azony atao ny mitazona ny azy ao amin'ny efitrano feno lehilahy raha ilaina izany, ary tsy mahazatra ny mahita azy miditra domains masculine stereotypically amin'ny asa sy fanatanjahantena.
Manaja ny lehilahy am-panajana izy, saingy mangataka izany haavo fanajana izany aminy.
15. Handeha lavitra izy raha ilaina izany.
Ny vehivavy Alfa izay mahatoky amin'ny tenany sy ny fanahiny dia mila mahatsapa fa manintona ny tenany izy, ary afaka miala amin'ny zavatra rehetra izy raha mila izany. Toe-javatra iray, tantaram-pitiavana, tanàna iray… raha iharan'ny tsy rariny izy na tsy hajaina izy, dia tsy manana ahiahy amin'ny famonosana azy io sy ny fandehanana lavitra mba hahatanteraka ny tena izy.
Mety ho olona matanjaka be izy, matoky tena ary matanjaka, nefa tsy midika izany fa tsy mahatsapa na masiaka izy. Ny maha-Alpha dia toetra voajanahary / mitaiza: ny vehivavy sasany dia teraka miaraka amin'ireo toetra ireo, fa ny hafa kosa mampivelatra azy ireo mandritra ny androm-piainany.
zavatra sasany tsy azon'ny vola vidiana
Na izany aza, ny vehivavy dia niova ho tena vehivavy Alpha, alao antoka io: mety hanam-paharetana izy ary handefitra mandritra ny fotoana fohy, fa raha atosinao lavitra loatra izy dia tsy hoe handeha fotsiny izy: hiantohany fa tsy misy lalana miditra helo fa hanaraka azy amin'izay alehany ianao.
Raha vehivavy mangozohozo, manjakazaka, mitaky, na masiaka amin'ny hafa dia tsy tena Alfa velively izy. Azo inoana fa olona tsy matoky tena izy izay maharary amin'ny sehatra maro, ary ny olany lalina dia miseho amin'ny fihetsika mahery setra sy tsy fanajana fa tsy fahatokisan-tena tena izy.
Tsarovy fa ny alika kely dia mikiakiaka sy manaikitra ary mivovo amin'ireo manodidina azy satria manana toerana ambany ambany izy ireo.
Ny amboadia tsy.
Tsy mila izany izy ireo.
Toetra mampiavaka ny lehilahy Sigma mampiavaka azy ireo amin'ny sisa
Toetra 5 an'ny fanahy afaka tokoa
Fitsipika 18 an'ny vehivavy matanjaka
ny fomba hiheverana ny orinasanao manokana
iza no dean mampiaraka ambrose
dia mpirahalahy mpiahy sy lahy
ny fomba fanaovana asa haingana kokoa
manandrana mampidina anao ny olona